भजनसंग्रह 98 ERV-NE - एउटा - Bible Gateway
भजनसंग्रह 97भजनसंग्रह 99
भजनसंग्रह 98 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
एउटा प्रशंसाको गीत।
1 परमप्रभु प्रति नयाँ गीत गाऊ
किनभने उहाँले नयाँ र छक्क पार्ने कुराहरू गर्नुभयो।
उहाँको पवित्र दाहिने पाखुराले
उहाँलाई फेरि विजय तुल्यायो।
2 परमप्रभुले आफ्नो बचाउने शक्ति जातिहरूलाई देखाउनु भयो।
परमप्रभुले आफ्नो धार्मिकता तिनीहरूलाई देखाउनु भयो।
3 उहाँका भक्तजनहरूले इस्राएल का मानिसहरू प्रति परमेश्वरको विश्वास सम्झिए।
सुदूर ठाउँमा भएका मानिसहरूले हाम्रो परमप्रभुको रक्षा गर्ने शक्ति देखे।
4 हे पृथ्वीमा भएका प्रत्येक मानिसहरूले, परमप्रभु प्रति खुशीले हल्ला गर।
प्रशंसाको गीत गाउन प्रारम्भ गर!
5 परमप्रभुको प्रशंसा वीणा बजाएर गर।
वीणाबाट निस्केको संगीतले, उहाँको प्रशंसा गर्दछ।
6 तुरही र कर्णालहरू बजाऊ,
अनि परमप्रभु हाम्रो राजा प्रति चिच्याउँदै प्रशंसा गर।
7 समुद्र र त्यहाँ भएका प्रत्येक कुराले,
पृथ्वी र त्यसमा भएका प्रत्येक कुराले जोडले गाओस्।
8 हे नदीहरू, आफ्ना हातहरूले थप्पडी मार!
पर्वतहरू सबै एकैसाथ आनन्दको गीत गाऔं।
9 परमप्रभुको सम्मुख गाऔं!
किनभने उहाँ संसारमा राज गर्न आइरहनु भएको छ।
उहाँले संसारमा न्यायपूर्वक राज गर्नु हुनेछ।
उहाँले धार्मिकतासित मानिसहरूमाथि राज गर्नुहुनेछ।